समयअगावै किन फुल्छ कपाल ? बच्ने कसरी ? - टि. एल. एन पोस्ट
Home स्वास्थ्य समयअगावै किन फुल्छ कपाल ? बच्ने कसरी ?
उमेर बढ्दै जाँदा कपाल फुल्दै जानु स्वाभाविकै हो । सामान्य अर्थमा कपाल फुले बुढ्यौली लाग्यो भनेर बुझिन्छ । तर आजकल कपाल सेतो हुदैमा मानिस बुढो हुदैन । आजभोलि कम उमेरमै कपाल फुल्नु धेरैको समस्या बन्दै आएको छ । पुरुषमा पहिला देखिने सेतो कपाल कन्चट र महिलाहरुमा टाउकोको दायाबायाँ हुन्छ ।
उमेर अगावै कपाल फुल्दा धेरैलाई हैरानी हुने गर्दछ । कपाल फुल्नु वा सेतो हुनुको पछाडि विभिन्न कारणहरु हुनसक्छ । सामन्यतया उमेर बढ्दै जादा कपालको रंगमा ह्रास आउँदै जान्छ र कपालको सेतो हुन्छ । यो प्राकृतिक प्रक्रिया हो ।
तर आजकलको जीवनशैलीका कारण युवा र बच्चाको समेत कपाल फुल्ने समस्या छ । यहाँ हामी कपाल सेतो हुने कारण बताउँदैछौं जसलाई ध्यान दिनुभयो तपाईंको कपाल असमयमै फुल्दैन ।
मानसिक तनाव लिने व्यक्तिहरुमामा पनि कपाल फुल्ने समस्या देखिन सक्छ।
बिशेषज्ञहरुका अनुसार रक्त अल्पता, थाइराइड तथा हर्मोनमा परिवर्तनले पनि चाडैँ कपाल फुल्दछ भने पेटको गडबडी वा पेटको रोगका कारणले पनि सानै उमेरमा कपाल फुल्ने गर्दछ । मदिरा, धुमपान, जंक फूड आदिको लामो सेवनले पनि सानै उमेरमा कपाल फुल्दछ भने जथाभावी रासायनिक पदार्थ, प्रदूषणले पनि उमेर अगावै कपाल फुल्दछ ।सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रीको अत्यधिक प्रयोग,कडा पानीले पनि कपाल छिट्टो फुलाउने साधन हुन् ।
Previous articleकाठमाडौं महानगरका यी ४ केन्द्रमा आज र भोली भेरोसेल खोप लगाइँदै
Next articleपूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल अस्पताल भर्ना